ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့၌ ဒေသခံများအား Sinovac's CoronaVac ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေး - Xinhua News Agency
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့၌ ဒေသခံများအား Sinovac's CoronaVac ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေး
မနီလာ ၊ ဧပြီ ၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ရှိ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေးနေရာတစ်ခုတွင် ဒေသခံများအား ဧပြီ ၄ ရက်က တရုတ်နိုင်ငံ Sinovac Biotech ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်သော CoronaVac ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးများ ထိုးနှံပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၌ ဧပြီ ၄ ရက်တွင် COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်မှုအသစ် ၁၁,၀၂၈ ဦးရှိကြောင်း နှင့် နိုင်ငံအတွင်း ကူးစက်ခံရသူ စုစုပေါင်းအရေအတွက်သည် ၇၉၅,၀၅၁ ဦးထိရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကျန်းမာရေးဌာန(DOH) က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့ရှိ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေး နေရာတစ်ခု၌ ဧပြီ ၄ ရက်က တရုတ်နိုင်ငံ Sinovac Biotech ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်သော CoronaVac ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူရန် စောင့်ဆိုင်းနေကြသော ပြည်သူများအားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ တရုတ်နိုင်ငံမှ လှူဒါန်းသည့် Sinovac’s CoronaVac ကာကွယ်ဆေးရောက်ရှိပြီး တစ်ရက်အကြာ မတ်လ ၁ ရက်မှ စတင်ကာ နိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု အစီအစဉ် စတင်ခဲ့သည်။အစိုးရအနေဖြင့် ယခုနှစ်အတွင်း ဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူ သန်း ၇၀ အား ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးပြီး လူထုအကြား ကိုယ်ခံအားစနစ်ရရှိစေရန် ရည်မှန်းထားကြောင်း နှင့် ဆေးထိုးနှံမှုကို ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ နှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများဖြင့် စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
Residents get inoculated with Sinovac’s CoronaVac COVID-19 vaccines in Manila, the Philippines
MANILA, April5(Xinhua) — Residents got inoculated with CoronaVac COVID-19 vaccines, made by Sinovac Biotech, atavaccination site in Manila, the Philippines on Sunday.
The Philippines’ Department of Health (DOH) reported 11,028 new COVID-19 infections on Sunday, bringing the total number of confirmed cases in the Southeast Asian country to 795,051.
The Philippines began vaccinations on March 1,aday after the first batch of Sinovac’s CoronaVac vaccine donated by China arrived in the country.
The government aims to inoculate up to 70 million Filipinos this year to achieve herd immunity, starting with health care workers and the elderly.
(၁)A resident is inoculated withadose of CoronaVac COVID-19 vaccine, made by Sinovac Biotech, atavaccination site in Manila, the Philippines on April 4, 2021. (Xinhua/Rouelle Umali)
(၂)Residents wait to be inoculated with CoronaVac COVID-19 vaccines, made by Sinovac Biotech, atavaccination site in Manila, the Philippines on April 4, 2021. (Xinhua/Rouelle Umali)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၌ COVID-19 လူနာသစ် ၁၀,၀၉၈ ဦး စစ်ဆေးတွေ့ရှိ ၊ လူနာပေါင်း ၉၃၆,၀၀၀ ကျော်ထိရှိလာ
COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်လာခြင်းအား ထိန်းချုပ်ရန် ဒေလီတွင် ညမထွက်ရ အမိန့်ထုတ်ပြန်
တရုတ်နိုင်ငံက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ ထပ်မံလှူဒါန်း